8 Stage 12V 20iyo Automatic lithium LiFePO4 Battery xeedho warshad iyo alaab | Ligao
8 Stage 12V 20iyo Automatic lithium LiFePO4 Battery xeedho
Shayga NO: LBC 1220
• technology Switchmode: Haa
• ilaalinta Polarity: Haa
• Output ilaalinta gaaban: Haa
• ilaalinta link batari Non: Haa
• In ka badan ilaalinta danab: Haa
• In ka badan ilaalinta heerkulka: Haa
• ilaalinta Barkinta: Haa
• taageere qaboojinta: heerkulka Automatic gacanta.
• Input danab: 220-240V AC, 50 / 60Hz / 110V AC, 50 / 60Hz.
• Awoodda Input: 554W
• saarka qiimeeyay: 12V DC, 20iyo
• Back Qasabadaha: 4mA
• danab ku bilaabatay Ugu Yar: 1.0V
• The 8 marxaladaha kala yihiin: Start jilicsan, Jumlada, dhuuqida, Falanqeeyaan, Dhameystirka, Maximization, birtiina Oo joogtee.
• kala duwan Battery: 40-200Ah
• Noocyada bateriga: baytariyada LiFePO4 12V Lithium-ra'iyi
• kulul ilaaliyo (taageere on): 65 ℃ +/- 5 ℃.
• Karti: App. 85%.
• heerarka Compliant: CB, CE, IEC60335, EN61000, EN55014
• aragti (L × W × H): 217 × 116 × 62mm
• Culayska: 1.28kg
In ka badan danab Protection
In ka badan Protection Heerkulka
Tani waa si buuxda automatic xeedho batari lithium la 8 Marxaladaha lacag.
xukun Automatic ilaalineysa batteriga ka overcharged. Sidaas daraaddeed waxaad ka bixi kartaa xeedho ku xiran batteriga aan xad lahayn.
xukun 8-yada waa hab xukun aad u dhameystiran oo sax ah in aad siinaysaa batari nolol dheer iyo waxqabadka wanaagsan marka la barbar dhigo isticmaalaya saxan dhaqanka.
The saxan 8-yada waxaa loogu talagalay batariyada lithium-ra'iyi la isticmaalayo technology LiFePO4 kaliya.
Step1. Start jilicsan
A hababka lacag hordhac ah in si tartiib ah barayaa amar ay batteriga. Tani waxay ka ilaaliya batteriga iyo kordhisaa nolosha batteriga.
Tallaabada 2. Jumlada
Amraya oo leh hadda ugu badan ilaa awoodda qiyaastii 90% batteriga.
mode bulk waayo, wareegga xukun. Wejiga bilowga sii ilaa danab terminal batteriga ayaa soo sara kacay kor ku xad go'an, taas oo farta ku shido xeedho si bulk xukun.
Haddii danab ku terminal aan maray xadka danab gudahood waqtiga xadidan ee, daaro xeedho si khalad mode (Tallaabada 2 laambad adag) iyo haro xukun. Haddii ay sidaas tahay, batteriga gardaran ama awoodda aad u ballaaran yahay.
Tallaabada 3 dhuuqida
Amraya oo leh hadda hoos u dhac in ay kor u kordhiyo in 95% awooda batariga.
Tallaabada 4 Falanqeeyaan.
Tijaabi haddii batari ku qaadi kartaa lacag. Baytariyada aan qaban karaan lacag laga yaabaa in u baahan tahay in la bedelo.
Tallaabada 5 Dhameystirka
lacag Final iyadoo hadda kor u kacay.
Tallaabada 6 Maximization
Charge Final ilaa danab ugu badnaan ilaa 100% awooda batariga.
Tallaabo 7 sabeyn
stage sabeyn waxay leedahay batteriga at 100% lacag batari la'aan overcharging ama dhaawac batteriga. Taas macnaheedu waxa weeye xeedho waa laga tegi karaa xiran batteriga aan xad lahayn.
Tallaabada 8 ilaaliyaan
Joogtaynta batteriga at 95% awooda -100%. xeedho wuxuu kormeera danab batteriga iyo siinayaa ah u ilaaliyaan marka loo baahdo si ay u sii batteriga si buuxda u soo oogay.
12 si toos ah lithium batari xeedho ayaa 8- tallaabo wareegga ah xukun si buuxda automatic. xeedho ayaa si toos ah u dhaco dib u bilowga ee xariiqa qallooca xukun.
No arrinta size ama nooca, waxaa ka tago si LBC-Charge. Power ee xirfadlayaasha.
Baako iyo maraakiibta
Mid ka mid ah damaanad sano.
OEM waa HELI!
Si heer-iibka Pre iyo nidaamka adeegga dib iibka.
l 30-saaraha Factory xirfadeed ee Zhongshan, Shiinaha
Previous: 8 Stage 12V 20iyo Automatic lithium LiFePO4 Battery xeedho
12 Waat Battery xeedho
12v 24v Automotive Battery xeedho
12v 24v Battery xeedho
12v Battery xeedho
12v Car Battery xeedho
24v Lithium Car Battery xeedho
Auto Battery xeedho
Automatic Battery xeedho
Automatic Battery xeedho Waayo, Car
Battery xeedho Waayo, Car
Battery xeedho Waayo Generator
Battery xeedho Waayo Toy Car
Battery xeedho Iyadoo hoggaamiyo
Best Auto Battery xeedho
Diesel Generator Battery xeedho
Electric Bike Battery xeedho 12.6v
Electric Car Battery xeedho
Dalxiiska Doon Battery xeedho
Waayo, Paslode Battery xeedho
Joogtaynta High Battery xeedho
Housseboat Battery xeedho
Lead 12v Acid Battery xeedho
Lifepo4 Battery xeedho
Baaskiilka Battery xeedho
Qc3.0 Car Battery xeedho Cable
Dabayn Battery Chargers
Rohs Battery xeedho
Smart Car Battery xeedho
Solar Battery xeedho